Ny tanjon'ny zavamananaina tsirairay dia ny hiantohana ny fivelaran'ny karazany ho taranaka ho avy. Izany no mahatonga ny olona mibebaka. Ny tanjona manontolo dia ny hahazoana antoka fa mitohy ny karazam-bolo aorian'ny nahafatesan'ny olona. Raha afaka mizara sy miaina ao anatin'ny taranaka ho avy ny tsirairay, dia tsara kokoa ho an'ny olona izany. Raha ny filazàna azy, dia mahatsapa fa, rehefa nandeha ny fotoana, ny karazam-pambolena dia nanangana rafitra samihafa izay manome antoka fa ny olona dia ho velona mandritra ny fotoana lava mba hamerina sy handefasana ny fototarazo ho an'ny taranaka sasany izay hanampy amin'ny fanaovana antoka fa mitohy mandritra ny taona maro ny karazany tonga.
Famerenana ny fittest
Ny tena fototry ny teboka velona dia manana tantara lava be evolutionary ary maro no voaro eo amin'ny karazana. Ny toy izany dia antsoina hoe "ady na fiaramanidina". Ity rafitra ity dia niova ho fomba iray ho an'ny biby mba hahafantarana ny loza mety hitranga ary hanao zavatra izay mety ho azo antoka ny fivelomany. Amin'ny ankapobeny, ny vatany dia eo amin'ny haavon'ny fahombiazan'ny haavony izay maranitra kokoa noho ny fahita mahazatra ary ny fahamalinana tafahoatra. Misy ihany koa fiovana mitranga eo amin'ny vatan'ny metabolisma izay mamela ny biby ho vonona ny hijanona ary "hiady" ny loza na handositra amin'ny "sidina" amin'ny loza mitatao.
Noho izany, inona marina no mitranga ao anatin'ny vatan'ny biby rehefa navotsotra ny valiny "ady na vidina"? Ampahany amin'ny rafi-pitantanana mahazatra izay antsoina hoe fizarazarana miavaka izay mifehy ity valinteny ity. Ny rafi-pitabataban'ny autonomika dia ampahany amin'ny rafi-pitabatabana izay mifehy ny fizotry ny tsy fahitan-javatra rehetra mitranga ao anatin'ny vatana.
Anisan'izany ny famarotana ny sakafo hohaninao mba hitazonana ny ranao mandrehitra ny hormones izay mihetsiketsika avy amin'ny vavanao mankany amin'ny sela kininina samihafa amin'ny vatanao. Misy fizarana telo misongadina amin'ny rafi-pitondrana mahazaka. Ny fizarana parasy mampihetsi-po dia mikarakara ny "fitsaharana ary mandany" valiny izay mitranga rehefa miala voly ianao.
Ny fizarazaran'ny fifehezana ny rafi-pitabataban'ny autonomie dia mifehy ny ankamaroan'ny rafitrao. Ny fizarazarana am-pitiavana dia manipika rehefa misy olana goavana, toy ny loza mitatao amin'ny loza, eo amin'ny manodidina anao.
Ny tanjon'i Adrenaline
Ny hormone antsoina hoe adrenalinina no tena manan-danja amin'ny valin'ny "ady na ny sidina". Adrenalinina dia afenina avy amin'ny ratra amin'ny tendron'ny voa fantatra amin'ny loharano adrenaliny. Ny zavatra sasany adrenalinina dia ao anatin'ny vatan'olombelona dia ahafahana mampihetsi-po sy ny fanafody haingana kokoa, mahavariana ny fihetseham-po toy ny maso sy ny sofina, ary indraindray aza manasitrana fery. Izany dia manomana ny biby ho an'ny valinteny rehetra, na mijanona ary miady amin'ny loza na mandositra haingana, dia ny mifanaraka amin'ny toe-javatra misy azy.
Ireo evolisiona biolojista dia mino fa ny valin'ny "ady na ny sidina" dia tena zava-dehibe amin'ny fiverenan'ny karazana mandritra ny Geologic Time . Ny zavamananaina tranainy indrindra dia noheverina fa manana an'io karazana valiny io, eny fa na dia tsy ampy ny atidoha izay karazana maro aza ankehitriny. Bibidia marobe maro no mbola mampiasa io toe-javatra io isan'andro, mba hanaovana izany amin'ny fiainany. Ny olombelona kosa, etsy an-daniny, dia nanangana sy nampiasa io toe-javatra io tamin'ny fomba samihafa amin'ny andavanandro.
Ahoana ny fiatrehana ny adinadin'ny fiainana isan'andro amin'ny ady na amin'ny fiaramanidina
Ny tsindry ho an'ny ankamaroan'ny olona dia naka famaritana samihafa tamin'ny vanim-potoana maoderina amin'izao fotoana izao fa tsy ny dikan'ny biby iray izay miezaka ny ho tafavoaka velona any anaty ala. Ny tebiteby ho antsika dia mifandray amin'ny asa, ny fifandraisana, ary ny fahasalamana (na ny tsy fisian'izany). Mbola mampiasa ny valin'ny "ady na ny sidina" izahay, fa amin'ny fomba hafa ihany matetika. Ohatra, raha manana famelabelarana goavana ianao eo amin'ny asa, dia azo inoana fa ianao no ho lazaina fa natahotra. Ny fizarazarana ny fahatsapanao ny rafi-pitabatabatoo an-tsokosoko dia nipoitra ary mety hanindrona ny palma, haingana kokoa ny fo amam-pihetseham-po, ary hihena bebe kokoa. Antenaiko, amin'izay ianao, dia hitoetra sy "hiady" ary tsy hitodika sy hivoaka ny efitrano.
Indray mandeha any, mety hihaino tantara iray momba ny fomba nanomanan'ny reny zavatra lehibe sy mavesatra, toy ny fiara, ny zanany.
Ity koa dia ohatra iray amin'ny valin'ny "ady na ny sidina". Ny miaramila ao anaty ady koa dia mety hampiasa ny valiny "ady na fiaramanidina" rehefa miezaka ny ho tafavoaka velona amin'ny toe-javatra mahatsiravina.
Ahoana no hanazavan'ireo manam-pahaizana momba ny dinôzôro?
Ny vanim-potoanan'ny Ordovisy (488-443 tapitrisa taonina eo ho eo)
Transcription vs. Fandikan-teny
Inona no nolazain'i Fossilized Poop momba ny Dinosaurs?
4 Mahatsapa ny biby fa tsy ny Olombelona
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Dakota Avaratra
Ireo rehetra momba ny famindram-po
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany New Mexico
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Hawaii
Izay toerana tokony handehananao araka ny endrik'ireo astronomika
Ahoana no fomba hamahana an'i Sharpie maina
Inona no atao hoe Quantum Optics?
Lisitry ny lisitry ny fisamboaran-tsambo ho an'ny mpanamboatra fiara
Ireo olona ireo no nanome ny andinin-tsoratra tsara indrindra tamin'ny adiresy SMS diso
Inona no atao hoe fandringanana?
Torohevitra momba ny fahatsiarovana ny fomba hanoratana ny Alarobia sy ny teny mahonena hafa
Sary Gallery: Inside Studios Studios
Top 5 Jack Nicklaus Seasons amin'ny PGA Tour
Ady lehibe faharoa: Tirpitz
Inona no atao hoe fanoherana ny zavakanto?
Ny Imams avy any Lameka: Tsara tohanana, malemy saina, ary be atao
Ireo torohevitra mba hahazoana ny fanamafisana ny fandikana planin-tserasera
Ny Vaovao Mahagaga Vaovao An'izao Tontolo Izao
Ny Mesoamerican Ancient Game Game and Gameplay
Ny roambinifolo roambinifolon'ny zodia Japone
Jazz tamin'ny Decade: 1930-1940
Fantaro ny Elms
Famaritana sy ohatra amin'ny Elision amin'ny teny Anglisy
Manamboara rakitra misimisy (.URL) amin'ny fampiasana Delphi